Shiinaha Soosaarka Bisadda Dabiiciga ah iyo Warshad | Bondhot
Faa'iidada qashinka bisadda Tofu ee noocyada kale ee qashinku waa
● Badbaado- waxaa laga soo saaray wax soo saar dabiici ah taas oo ka dhigaysa mid aan dhib lahayn haddii ay xayawaanku cunaan.
● Taabasho jilicsan oo laga sameeyay haraaga digirta dabiiciga ah iyo istaarijka galleyda oo leh Ultra-soft soft kaas oo kudaweynaya feline leh bawdo xasaasi ah.
Boorka Bilaash-Waxay ka caawisaa sidii loo ilaalin lahaa marinka neefta ee xayawaanka leh walxaha eber ka kooban.
Abs Nuugista Sare iyo Suuq-u-yeelista- Waxay si dhakhso leh u qoysaa kaadida bisadaha waxayna kala saaraysaa urta xooggan ee taabashada.
● Saarid Fudud - Kilinku waa mid aad loo dhaqi karo isla markaana la baabi'in karo isla markaana fudud in lagu tuuro musqusha ama beerta bacrimin ahaan.
● Qaadashada fudud - Waxay ka dhigeysaa kuuskuus adag oo adag oo sahal ah in laga saaro.
Deegaanka u wanaagsan - waxay soo saartaa ur wanaagsan inkasta oo ay kaadida bisaduhu ka baxaan jawiga bey'ada u fiican.
Track Jid yar, nadaafadda guriga ku ilaali
Qashinka bisadaha tofu-ka ah ee cuntada ka sameysan waxaa laga sameeyaa soybean-ka dabiiciga ah waxaana lagu abuuraa iyadoo la adeegsanayo tiknoolajiyada hogaanka iyo qallajinta dhaqsaha badan, waa mid deegaanka u roon, malaha waxyaabo kiimikaad lagu daro, waxayna ka hortageysaa xannibaadda caloosha markay bisaddaadu liqdo.
Astaamaha ka-hortagga raadraaca waxay u sameeyaan nadiifin sahlan! Qashinka bisadaha Tofu wuxuu ka kooban yahay walxo ka soo baxa dhirta oo leh ul aan dheellitirnayn iyo qaacido adag oo gaar ah oo ka caawisa abuurista buro yaryar oo adag taas oo ka dhigaysa mid fudud qaadashada. Milkiilayaasha bisadu sidoo kale waxay ogaan doonaan raadraac yar waxayna Bisaduhu ku raaxeysan doonaan qaab jilicsan oo jilicsan oo aad ugu raaxeysan kara lugahooda xasaasiga ah.
Waa mid ka mid ah qashinka bisadaha loogu jecel yahay sababo la xiriira qeybaha bey'ada u fiican sida biodgradable bean curd & cornstarch. Ku milmay xabagta khudradda iyo carfinta ka dibna u samaysan ciid ciid ah. Si ka duwan Clay ama Silica qashinka, Tofu bisadaha qashinku waa 100% waa la nooleyn karaa taas oo macnaheedu yahay inay nabdoon tahay in lagu shubo musqusha ama loo isticmaalo bacriminta beeraha.
Adiga iyo bisaddaadu waxay ku soo gaadhaan inaad ku neefsataan waxyaabo ka dhasha boodhka dheriga dheriga, maxaase ka sii daran? Bisaddaadu sidoo kale way cunaysaa markay nadiifiso baalasha oo ay kula wadaagto dhunkasho! Si ka duwan Clay ama Silica, qashinka bisadaha Tofu waxaa sameeya 100% digir dabiici ah (wax soo saarka tofu). Kaliya Kiimikada Bilaash ma ahan, laakiin sidoo kale waxay la socotaa Xakamaynta urta aan laga adkaan karin. Wuu nuugaa kaadida wuxuuna qallajiyaa qashinka adag 5x xakamaynta urta oo kafiican qashinka dhoobada.
Hore: Qashinka bisadda
Xiga: tofu qashin bisad